UMnu Tian nethimba lakhe bagxile kakhulu ekunikezeni ngezinsizakalo zezomthetho ezihlobene nezangaphandle kumakhasimende enza ibhizinisi noma neChina evela kuwo wonke umhlaba.
Izinsizakalo zethu zihlukaniswe ngezigaba ezimbili ngokuya ngezinhlobo zamakhasimende: izinsizakalo zamakhasimende ezinkampani, nezinsizakalo zabantu ngabanye, kufaka phakathi abokufika eChina, ikakhulukazi eShanghai.
Okwezinkampani Zamabhizinisi / Amabhizinisi
Njengeqembu elincane, asiziqhayisi ngezinsizakalo zomthetho eziphelele, kodwa, sifuna ukugqamisa ukugxila kwethu namandla lapho singenza kangcono kunabanye.
1. Ukutshalwa Kwezimali Okuqondile Kwangaphandle eChina
Sisiza abatshalizimali bakwamanye amazwe ngokwenza amabhizinisi abo okuqala e-China ngokusungula ibhizinisi labo e-China, kufaka phakathi ihhovisi elimele, igatsha lebhizinisi, ama-Sino-foreign joint ventures (i-equity JV noma i-contract ye-JV), i-WFOE (ibhizinisi eliphethwe ngabangaphandle), ubambiswano , isikhwama.
Ngaphezu kwalokho, senza i-M & A, sisiza abatshalizimali bakwamanye amazwe ekutholeni izinkampani zasekhaya, amabhizinisi, nezimpahla zokusebenza.
2. Umthetho Wezakhiwo
Le ngenye yezindawo zethu zokuzijwayeza lapho sithuthukise futhi sabala khona ulwazi oluningi nobuchwepheshe. Sisiza amaklayenti nge:
(1) ukubamba iqhaza kwinqubo yokubhida yomphakathi yokuthengisa ilungelo lokusetshenziswa komhlaba ukuthola umhlaba ofiselekayo wokuthuthukisa impahla noma izinjongo zezimboni ezifana nezimboni zokwakha, izindawo zokugcina izimpahla njll;
(2) ukuzulazula emithethweni esindayo neyinkimbinkimbi yemithethonqubo ephathelene nokuthuthukiswa kwephrojekthi yezezakhiwo, izindawo zokuhlala noma ezentengiselwano, ikakhulukazi imithetho yokwabiwa kwezindawo zasemadolobheni nemithetho yokwakha;
(3) ukuthola nokuthenga izakhiwo ezikhona, izakhiwo ezinjengefulethi yesevisi, isakhiwo samahhovisi nezakhiwo zezentengiselwano, kubandakanya ukwenza uphenyo ngokucophelela ngezakhiwo okukhulunywa ngazo, ukwakheka kwamadili, intela nokuphathwa kwempahla;
(4) ukuxhaswa kwephrojekthi yezindlu, imalimboleko yasebhange, imali yezethembiso;
(5) ukutshalwa kwezindlu kwempahla yaseChina, ukufuna amathuba egameni labatshalizimali bakwamanye amazwe ukuvuselela, ukuvuselela kabusha nokuthengisa kabusha izakhiwo ezifanayo.
(6) ukuqashiswa kwezindlu / izindlu, ukuqasha izindawo zokuhlala, amahhovisi nezimboni.
3. Umthetho Jikelele Wenkampani
Ngokuphathelene nezinsizakalo zomthetho ezihlanganisiwe, imvamisa singena esivumelwaneni saminyaka yonke noma sokugcina imali namakhasimende lapho sinikeza izinto ezahlukahlukene zezinsizakalo zokubonisana zomthetho, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho:
(1) ushintsho olujwayelekile lwenkampani kububanzi bebhizinisi, ikheli lehhovisi, igama lenkampani, imali ebhalisiwe, ukwethulwa kwegatsha lebhizinisi;
(2) ukweluleka ngokuphathwa kwezinkampani, ukubhala imiyalo yedolobha elawula ukusebenza komhlangano wabaninimasheya, umhlangano webhodi, abamele ezomthetho kanye nemenenja jikelele, imithetho elawula ukusetshenziswa kwezinkampani ezihlanganisayo, kanye nemithetho ephathelene nesikhuthazo sokuphatha;
(3) ukweluleka ngezindaba zokuqashwa nezabasebenzi zamakhasimende, ukubuyekeza izinkontileka zabasebenzi kanye nemithetho yedolobha yabasebenzi emazingeni ehlukene, ukubhala incwadi yabasebenzi, ukudilizwa kwabantu abaningi, kanye nokulungiswa kwabasebenzi kanye namacala;
(4) ukweluleka, ukubhala, ukubuyekeza, ukuthuthukisa zonke izinhlobo zezinkontileka zebhizinisi ezisetshenziswa ekusebenzeni kwamabhizinisi namakhasimende angaphandle;
(5) ukweluleka ezindabeni zentela maqondana namabhizinisi amaklayenti.
(6) ukuhlinzeka ngezeluleko zezomthetho ngamasu wokuthuthukisa amaklayenti ezwekazini laseChina;
(7) ukuhlinzeka ngezeluleko zezomthetho ezindabeni zamalungelo empahla yengqondo, kufaka phakathi ukufaka isicelo, ukudlulisa nelayisense lobunikazi, uphawu lokuhweba, ilungelo lobunikazi nokunye;
(8) ukubuyisa okutholwayo okufanele kuthunyelwe ngokuthumela izincwadi zommeli esikhundleni samakhasimende;
(9) ukubhala, ukubuyekeza izinkontileka zokuqasha noma izinkontileka zokuthengisa zezindawo eziqashiswe noma ezingamakhasimende ehhovisi lazo noma ezakhiweni zokukhiqiza;
(10) ukubhekana namakhasimende amaklayenti izimangalo ezingenabo ubungani, nokuhlinzeka ngokubonisana okufanele ngokomthetho ngakho;
(11) ukuxhumanisa nokulamula izingxabano phakathi kwamakhasimende neziphathimandla zikahulumeni;
(12) ukuhlinzeka ngolwazi lokulawula mayelana nemithetho ye-PRC nemithethonqubo ephathelene nokusebenza kwebhizinisi leklayenti; nokusiza abasebenzi bayo babe nokuqonda okungcono ngokufanayo;
(13) ukubamba iqhaza ezingxoxweni eziphakathi kweKlayenti nanoma yimuphi umuntu wesithathu ezindabeni zokuhlanganiswa, ukutholwa, ukuhlanganyela, ukwakhiwa kabusha, ukusebenzisana kwebhizinisi, ukudluliswa kwempahla nezikweletu, ukwehluleka ukukhokha izikweletu nokuqedwa;
(14) ukwenza uphenyo ngokucophelela kozakwethu bebhizinisi lamakhasimende ngokuthola amarekhodi ezinkampani alabo abalingani abagcinwe nemboni yendawo kanye ne-commerce bureau;
(15) ukuhlinzeka ngemisebenzi yezomthetho kanye / noma ukubamba iqhaza ezingxoxweni zezingxabano nezingxabano;
(16) ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuqeqeshwa kwezomthetho nezinkulumo ngemithetho ye-PRC kubaphathi bamakhasimende nabasebenzi.
4. Ukulamula kanye necala
Sisiza amaklayenti aphesheya ukuthi enze ukulamula nokuqulwa kwamacala eChina ekuphishekeleni, ekuvikeleni nasekuvikeleni izintshisekelo zabo eChina. Simelela amaklayenti angamazwe omhlaba cishe kuzo zonke izinhlobo zezingxabano ezingaphansi kweziphathimandla zezinkantolo zaseChina, njengezimpikiswano ezihlanganyelwe, ibhizinisi, ukuthengiswa kwamazwe omhlaba nenkontileka yokuthenga, inkontileka yokunikezela, izivumelwano zamalayisense e-IPR, ukuhwebelana kwamazwe omhlaba nezinye izingxabano zezentengiselwano namaqembu aseChina.
Okwabantu / Ama-expats / Abezizwe
Kule ndawo yokusebenza, sinikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zomthetho zomphakathi ezidingeka njalo ngamakhasimende ngamanye.
1. Umthetho Wezomndeni
Ngisize abantu abaningi bakwamanye amazwe noma abaphuma eChina ngezinkinga zabo ezivela phakathi kwezithandani, amalungu omndeni. Ngokwesibonelo:
(1) ukubhala izivumelwano zabo zangaphambi komshado nabomakoti babo nabakhwenyana abavame ukuba ngabesilisa noma abesifazane baseChina, nokwenza olunye uhlelo lomndeni ngempilo yesikhathi esizayo yomshado;
(2) ukweluleka amaklayenti ngezehlukaniso zawo eChina ngokwakha amasu awo wokwehlukanisa ekuvikeleni izintshisekelo zawo kumongo weziphathimandla eziningi ezibandakanyekile ezinkambisweni ezivame ukwenza kube nzima inqubo yokuhlukanisa; ukweluleka ngokuhlukaniswa, ukwahlukaniswa kwezakhiwo zomshado, izakhiwo zomphakathi;
(3) ukweluleka ngokugcinwa kwabantwana, ukunakekelwa nokunakekelwa;
(4) izinsizakalo zokuhlelwa kwefa lomndeni maqondana nezimpahla zomndeni noma izakhiwo eChina ngaphambi kokushiya.
2. Umthetho Wefa
Sisiza amaklayenti ekutholeni ifa, ngentando noma ngomthetho, iziza zifa noma zashiywa yizihlobo zabo ezithandekayo, izihlobo noma abangane. Iziza ezinjalo zingaba izakhiwo zangempela, imali yasebhange, izimoto, izintshisekelo zokulingana, amasheya, izimali nolunye uhlobo lwempahla noma imali.
Uma kunesidingo, sisiza amaklayenti ekwenzeni ifa lawo ngokusebenzisa inqubo yasenkantolo engahle ingabi nobutha uma nje amaqembu evumelana ngentshisekelo yawo ezindaweni.
3. Umthetho Wezakhiwo
Sisiza abantu bakwamanye amazwe noma abathengisa ukuthenga noma ukuthengisa izindawo zabo zase-China, izakhiwo ze-esp eziseShanghai lapho sizinze khona. Weluleka lawo maklayenti ngenqubo enjalo yokuthengisa noma yokuthenga ngokuwasiza ekwakheni imigomo nemibandela yokuthengiselana futhi abone ukusebenza kwezinkontileka zesivumelwano.
Mayelana nokuthengwa kwekhaya eChina, sisiza amaklayenti ukuthi aqonde imikhawulo yokuthenga ebekwe kuma-expats, ukubhekana nezinhlangano ezihlobene kufaka phakathi abathengisi, abathengisi namabhange kanye nokubhekana nezinkinga zokushintshaniswa kwemali yakwamanye amazwe ezibandakanyeka kule nqubo.
Mayelana nokuthengisa indawo eShanghai, eChina, asisizi nje kuphela amaklayenti ukuthi atelekele izinkontileka zabathengi kodwa futhi siwasiza ukuthi aguqule imali ayithengisayo iye ekuhwebelaneni namanye amazwe njengamadola aseMelika futhi afake ucingo olufanayo aphume eChina aye ezweni lawo.
4. Umthetho Wokuqashwa / Wezabasebenzi
Lapha futhi sivame ukusiza abathengisi abasebenza eShanghai ukubhekana nabaqashi babo esp uma kunezimpikiswano ezinjengokuxoshwa ngokungafanele nokukhokhelwa ngaphansi njll.
Njengoba kunikezwe isimo sokuchema soMthetho Wenkontileka Yezabasebenzi waseChina neminye imithetho engenangqondo, ngokukhishwa okuningi okuthola umholo ophezulu eChina, uma sekukhona impikiswano nabaqashi, abasebenzi bavame ukushiywa esimeni esihlazo lapho kuzodingeka bakhothame phambi kwabaqashi babo ukuthi abavikelekile kakhulu ngaphansi kwemithetho yabasebenzi baseChina. Ngakho-ke, ngokubheka ubungozi obunjalo obuhlobene nokuqashwa kwama-expat e-China, sikhuthaza abathengisi abavela emazweni angaphandle abasebenza e-China ukuthi bafike kwizivumelwano ezisemthethweni nezinkampani zabo ukugwema ukubhajiswa esimweni esinzima e-China.
5. Umthetho Wokulimala Komuntu Siqu
Sisingathe amacala amaningi okulimala kwabantu abandakanya abokufika abalimele ezingozini zomgwaqo noma ezinkulumweni. Sifuna ukuxwayisa abokufika eChina ukuthi baqaphele ngokuqapha ukulimala eChina ngoba ngaphansi kwemithetho yamanje yaseChina yokulimala kwabantu, abokufika bazothola isinxephezelo esikhishwa izinkantolo zaseChina kubo asamukeleki neze. Noma kunjalo, lokhu kuyinto ezothatha isikhathi eside ukuyiguqula.
Ummeli Wezomthetho Wenkampani yaseChina, I-China Divorce Law Firm, I-China Family Law Firm,